बाबुरामको चियापान कार्मायक्रममा नेताहरुबीच हानाहान, एक नेताको टाउको फुट्यो, केछ अवस्था ? — Sanchar Kendra
बाबुरामको चियापान कार्मायक्रममा नेताहरुबीच हानाहान, एक नेताको टाउको फुट्यो, केछ अवस्था ?
काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी समाजवादी पार्टीको चियापान कार्यक्रममा कुटाकुट भएको छ । सप्तरीमा पार्टीले आयोजना गरेको चियापन कार्यैक्रममा नेताहरुबीच कुटाकुट भएको हो । पार्टीले बिहीबार राजविराजमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा नेताहरुबीच कुटाकुट भएको त्यहाँ स्थित हाम्रा संबाददाताले बताएका छन् । दशैंको अवसरमा स्थानीय साह धर्मशालामा आयोजना गरिएको कार्यक्रमपछि मदिरा पिएका नेताहरुबीच झगडा भएको बताइएको छ ।
बोल्ने जति सबैलाई जिल्ला इन्चार्ज सत्यनारायण यादवले चुप लगाउने गरेको र त्यही क्रममा जिल्ला नेता लक्ष्मण यादवसँग भनाभन भएको एक नेताले बताए । त्यही क्रममा कुटाकुट हुँदा जिल्ला इन्चाज यादवको टाउको फुटेको छ । उनलाई राति नै गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचार गराइएको छ । उनको टाउकोमा चार वटा टाँका लगाइएको छ । यसैबीच डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीले चुनाव चिन्ह पाँच औंलासहितको हत्केला पाएको छ ।
संघिय समाजबादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी मिलेर बनेको नयाँ पार्टी समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिएर पाँच औंला भएको हत्केला सहितको हातलाई चुनाव चिन्हको रुपमा दिएको हो । आउँदै गरेको उपनिर्वाचनका लागि आयोगले डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको सो पार्टीलाई चुनाव चिन्ह एक झापड दिएको छ । यसअघि संघिय समाजबादी फोरमको चुनाव चिन्ह मसाल थियो भने नयाँ शक्ति पार्टीको देब्रे आँखा थियो ।
यसैबीच मालपोत कार्यालय महोत्तरीका कार्यालय प्रमुख भुपबहादुर बोगटी मदिरा सेवन गरेर कार्यालय गएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । कार्यालय समयमा मदिरा पिएर सेवाग्राहीमाथि नै अपशब्द बोलेपछि कार्यालय प्रमुख बोगटीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । शुक्रबार दिउँसो २ः३० बजेरित बोगटीलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) माधव बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
‘मालपोत कार्यालय प्रमुखले मदिरा पिएर सेवाग्राहीमाथि अपशब्द बोलेको भनेर मौखिक उजुरी आएपछि उहाँलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ डिएसपी बुढाथोकीले खबरहबसँग भने, ‘अहिले हामीलाई उहाँलाई प्रहरी कार्यालयमै राखेका छौं ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार मालपोत प्रमुख बोगटी यसअघि पनि मदिरा सेवन गरेर कार्यालय जाने गरेका थिए ।
सार्वजनिक स्थानमा मदिरा सेवन गरेर झै–झगडा गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने कानून प्रावधान छ । तर, मालपोत प्रमुख बोगटीले भने पदीय ‘शक्ति’को आडमा छुट पाउँदै आएको मालपोत कार्यालय महोत्तरीका एक कर्मचारीले बताए ।
मालपोत प्रमुख बोगटीमाथि हुने कारबाहीबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग परामर्श लिइने महोत्तरी प्रहरीका डिएसपी बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘उहाँ राष्ट्रसेवक कर्मचारी हो । मदिरा सेवन गरेर कार्यालय जानुभएको विषय छ । यससम्बन्धमा के–कस्तो कारबाही गर्ने भनेर हामीले सीडीओसापसँग परामर्श लिँदै छौं,’ डिएसपी बुडाथोकीले भने ।